जाडोमा हृदयाघातबाट, कसरी सतर्क रहने ? – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ जाडोमा हृदयाघातबाट, कसरी सतर्क रहने ?
जाडोमा हृदयाघातबाट, कसरी सतर्क रहने ?
पुलेसो ११ पुस, २०७८, आईतबार १७:३०
जाडोको मौसममा हृदयघातको जोखिम बढी हुन्छ । त्यसैले जाडो याममा सतर्कता अपनाउनै पर्छ, खासगरी हृदयका रोगीले ।
त्यसैपनि जाडो मौसममा मुटु रोगीका लागि अनुकुल मानिदैन । वाह्य चिसोको कारण नसाहरु खुम्चने वा साँघुरिने हुन्छ । यसले रक्त प्रवाहमा कठिनाई ल्याउँछ । जसको सोझो भार, मुटुमाथि पर्छ । यस्ता अनेक कारण छन्, जसले जाडोमा हृदयघातको जोखिम बढाउँछ ।
कसरी हुन्छ हृदयघात ?
रक्तनलीमा कसरी जम्छ बोसो ?
रक्तनलीमा बोसो जम्ने धेरै कारण हुन्छ । गलत खानपान, विलासी जीवन, व्यायामको कमी, धुमपान, मद्यपान लगायतका कारण मुटुमा बोसो जम्ने गर्दछ ।
त्यस्तै, रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा अधिक भएमा पनि रगतमा बोसो जम्ने गर्दछ । रक्तनलीमा बोसो जम्ने समस्या कसैलाई कलिलै उमेरदेखि नै हुने गर्छ भने कसैलाई युवावस्थामा हुने गर्छ । वभिन्न रोगहरुका कारण पनि रगतमा बोसो जम्ने समस्या हुने गर्छ ।
रक्तनलीमा कसरी बाधा आउछ ?
चिसोमा रक्तचाप कसरी बढ्छ
जाडो मौसममा हृदयाघात गराउने अर्को प्रमुख तत्वहरुमध्य हर्मोर्नको गडबडी पनि एउटा हो । शरीरमा रहेको विभिन्न हर्मोन विहानीपखको समयमा बढी सक्रिय रहने गर्दछ । जसका कारण पनि शरीरमा हृदयाघातको जोखिम बढ्ने गर्छ ।
त्यसबाहेक, चिसो मौसममा फोक्सोको संक्रमण, निमोनिया, दम, आज्माले पनि मुटुलाई असर गर्ने हुदाँ यो समयमा हृदयाघातको जोखिम बढी हुने भएकोले समयमै सजग रहन आवश्यक छ ।
१। शरीरमा तापमानको सन्तुलन कायम राख्ने
२। धेरै चिसोमा अचानक तडकभडक गर्नु हुँदैन
३। बिहान घाम लाग्नुअघि मर्निङवाक गर्नु उपयुक्त हुँदैन
४। रक्तचाप नियन्त्रित राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ
५। मुटु तथा फोक्सोको समस्या भएकाहरुले चिसोबाट जतिसक्दो बच्नुपर्छ
हुन त हृदयाघात जो कसैलाई हुनसक्छ । हृृदयाघातको निश्चित समय हुदैन । जुनसुकै उमेरका मानिस हृदयाघातको जोखिममा रहने गर्छन् ।
यद्यपी, कोलोनरी आर्टरीमा बोसो जमेर अवरोध खडा भएमा हृदयाघात हुनसक्ने भएकोले त्यस्ता मानिसले भने विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । किनकी त्यस्ता मानिसलाई चिसोको समयमा हृदयाघातको जोखिम उच्च हुने गर्दछ ।